Pigment Yero 139 ihupfu yakatsvuka yero pigment, ine yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, kujeka kwepamusoro, kupikisa kupisa kwakanyanya uye kukurumidza kukurumidza.
Yakakurudzirwa pendi dzeindasitiri, poda coatings.Inokurudzirwa kune coil coil uye pendi dzemotokari.Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 139 pazasi.
Pigment Yero 138 / CAS 30125-47-4
Pigment Yero 138 ihupfu yakatsvuka yero pigment, ine yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, kujeka kwepamusoro, kupikisa kupisa kwakanyanya uye kukurumidza kukurumidza.
Inokurudzirwa pendi dzemaindasitiri, pendi dzemvura, pendi dzakanyungudika, coil coil, poda coating, pendi dzemotokari, kudhinda machira.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 138 pazasi.